Ị nwere ike inyere m aka na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka backlinks na mgbasa ozi mmadụ?
Ee, enwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi dị iche iche na usoro ntanetị dị n'ịntanetị na elu peeji nke PageRank na DA (ikike mpaghara), nke nwere ike ịghọ ezigbo uru maka ebe ị ga-ejikọta ya na. Tupu ị nyochaa ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka backlinks na mgbasa ozi ọha na eze, rịba ama na n'okpuru ebe a, m ga - egosi gị naanị ndị isi - ebe ọ bụ na ị maaraworị òkè ọdụm nke netwọk ndị a. Yabụ, ka anyị lee otú ị ga-esi wulite ọnụnọ gị n'ịntanetị na n'ụzọ dị aṅaa ị kwesịrị isi na-etinyere akwụkwọ ndị dị n'ime ya - babboe city review. N'ezie, ihe niile ị chọrọ bụ iji nyekwuo ezigbo uru gị. Cheta na, ị ghaghị ịnyekwu uru na ọdịnaya gị. Ihe bụ na ihe ọ bụla ị dere na mgbasa ozi ọha na eze kwesiri ịdị oke ọnụ ma kwadoro ọdịmma gị. E wezụga nke ahụ, ekwenyere m na ime ihe nile dịka ihe dị mma na ịnakwere njikọ dịka o kwere mee bụ nanị ụzọ ị ga - esi na - adị ndụ ma ghara ịnọ na mpi kasị sie ike na -. Ruo oge ahụ, ka anyị lelee ebe nrụọrụ weebụ kacha mma maka backlinks si n'ebe ahụ.
netwọk a na-ewu ewu ma eleghị anya n'etiti weebụsaịtị kacha mma maka backlinks na mgbasa ozi mgbasa ozi. N'eziokwu, LinkedIn nwere ọtụtụ ebe dị iche iche na-ahapụ ọnụ ụzọ mepere emepe iji mepụta ụyọkọ njikọ maka uru. N'ebe a, ị nwere ike ịgbakwunye njikọ profaịlụ, yana njikọ nke ogwe aka dị mkpirikpi, na nkọwa ndị ọzọ na isi ihe nke gị.
Pinterest na-egosi akụkụ ya kachasị ike mgbe ọ na-abịakwute niche dị iche iche maka ọdịnaya, dị ka N'onwe Gị. Nzuzo a dị mma maka ịmegharị akụkụ nke ihe odide edere ederede gị n'ime ihe ọzọ na-ahụ anya ma na-ahụ anya ma ka na-enye nkọwa data, m. e. , infographics, spreadsheets, na na. Ntughari: Iji Pinterest iji wuo njikọ gbasara usoro ụlọ ọrụ njikọ gị ga - enwe mmetụta dị nro, yabụ egbula oge iji jikọta nke a na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka backlinks.
Karịsịa nke a na-elegharakarị anya. N'ihi ya, a naghị ekwukarị ya n'etiti ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka backlinks na mgbasa ozi mgbasaozi. Na ihe bụ na Instagram nwere ike n'ezie ghọọ ezigbo goldmine - nyere na ị nwere magburu onwe imagery na smart, echiche echiche maka reshaping visual ọdịnaya. Ma, rịba ama, na ndị ahịa ahịa dijitalụ na-abanye n'ebe ahụ mere ka ebe ahụ bụrụ ihe ịma aka nke otu mgbampi siri ike ahịa na-enwe.
Oge ụfọdụ gara aga, ụfọdụ njikọ profaịlụ, yana ndị dị na Google, nwere ike inwe ntakịrị arọ karịa njikọ nkịtị na-emekarị. O doro anya, ọ bụ ihe kachasị ọhụrụ PNG algorithm melite ka a wepụrụ aha a. Ka o sina dị, usoro ihe ntanetị nke ọha na eze site n'ịchọ nnukwu ibu nke ụwa ka bara uru itinye ụfọdụ njikọ bara uru n'ọnọdụ ọ bụla. Naanị cheta - ijikọta na Google+ bụ ụzọ ọhụụ a ga-esi gosi na ị nwere ike ịmegharị aha na ngwa ngwa.
Nke ahụ bụ ya! Anyị emesị hụ ụzọ a dị mfe isi wughachi backlinks. N'iburu n'uche na iji Tumblr maka ịbịaru njikọ bụ n'ezie ọrụ dị egwu. Ka o sina dị, ọ bara uru ịnwale onwe gị na ihe a ma ama - mgbe ị nwetara ezigbo backlink ma mee ya ka ọ na-ekesa, ị nwere ike ịnweta ohere ụlọ njikọ na-enweghị njedebe n'oge ọ bụla - ekele ọtụtụ puku subdomains na Tumblr.